Waqtiga dhaarinta Xildhibaanada Labada Gole oo la shaaciyay – HORUFADHI MEDIA |
Waqtiga dhaarinta Xildhibaanada Labada Gole oo la shaaciyay
Sida ku cad jadwalkaan 16-ka bishaan oo ku beegan Arbacada berrito illaa 23-ka bishaan ayaa la qorsheeyey in lasoo uruuriyo dukumintiyada Xildhibaannada labada Aqal ee baarlamaanka, iyadoo 24-ka ilaa 29-ka la qorsheeyey in la hubiyo dukumintiyadaas.
Inta u dhaxeysa 31-ka Maarso ilaa 4-ta bisha soo socota ee Abriil waxaa la qorsheeyey in la shaaciyo natiijada rasmiga ah ee doorashooyinkii baarlamaanka iyo in la soo xareeyo dhamaan Xildhibaannada labada Aqal.
5-ta Abriil ilaa 10-ka bishaas waxaa la qorsheeyey in shahaadada Xiildhibaanimada la siiyo dhamaan xubnaha la doortay ee labada Aqal.
Ugu dambeyntii 14-ka Abriil xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa qabanaya xafladda dhaarinta xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka 11-aad, sida ku cad jadwalkaan caawa ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal.
Guddiga doorashooyiinka Jubaland oo shaaciyay qabashada doorashada kuraasta Garbahaareey
Maxaa kasoo kordhay dagaalka dalka Ukraine?